Efa nanontany ny pitsopitsony teny amin’ny OVEC anefa ireo kandida na ny solontenany, raha ny tokony ho izy. Mahagaga ny mbola tsy fahafenoan’ny pitsopitsony kanefa nanana tapa-bolana nanomanana azy. Mety ho endriky ny tsy fahampian’ny fahamatorana. Misy aza ny sasany dia tena ny lisitra mihitsy no tsy ampy olona. Izany ve no ho lasa mpanao lalàna avy eo kanefa ny fitsipika sy ny fepetra ary tsy voahaja tao anatin’ny fe-potoana voafetra. Mety ho tsotsorina ny tahaka izany satria efa fombatsika Malagasy ny manaboribory resaka, saingy ny tahaka ireny no tsy mampandroso. Mifampitaiza amin’ny tsy mety amin’ny fanatsotsoran-javatra. Olona tsy manana fitoniana sy tsy matotra ve hahavita hanara-maso asana governemanta ? Ny mety ho tsy fahalalana ny pitsopitsony rehetra momba ny tena andraikitry ny solombavambahoaka manginy fotsiny. Izany tokoa angamba ilay fomba fialana bala hoe: ny manao zavatra tsy mora. Lojika be avy eo raha manangan-tànana sy mitady malety na fiara tsy mataho-dàlana no atao ao Tsimbazaza, ankoatra ny bizina samihafa mety handeha.